Ikhosi yeArcGIS Pro kunye neQGIS 3- malunga nemisebenzi efanayo-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeArcGIS Pro kunye neQGIS 3 - malunga nemisebenzi efanayo
Funda i-GIS usebenzisa zombini iinkqubo, kunye nemodeli yedatha efanayo
Ikhosi ye-QGIS yenziwa okokuqala ngeSpanish, kulandela izifundo ezifanayo kunye nezifundo ezaziwayo zesiNgesi Funda iArcGIS Pro Easy! Sikwenzile ukubonisa ukuba konke oku kunokwenzeka ngokusetyenziswa kwesoftware evulekileyo; soloko ngeSpanish Emva koko, abanye abasebenzisi besiNgesi basibuze, sakha ingxelo yesiNgesi yezifundo; Sisizathu sokuba i-software ye-QGIS isebenzise iSpanish, kodwa yonke imisindo ibhalwe ngesiNgesi.
Ngale khosi ungayandisa ikharityhulamu yakho ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi ofanayo usebenzisa iArcGIS Pro kunye neQGIS.
-Ingenisa idatha evela kwi-CAD
Uvavanyo-ngqondo kunye neelebheli
Izixhobo ezilahlekileyo kunye neetafile zokuhlela
Ikhosi ibandakanya idatha yokukhuphela kunye nokwenza umsebenzi wasekhaya njengakwiividiyo. Iphuhliswe kwiinguqulelo zamvanje ze-QGIS kunye neArcGIS Pro.
Izifundo zeArgGIS Izifundo zeQGIS